Kiniiniyada Chlorella ee Shiinaha 500mg oo hodan ku ah soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha fitamiinnada | Boqor Dnarmsa
DHAQANKA BADAN-VITAMIN- CHLORELLA
Waa maxay Chlorella?
Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Chlorella
1. Wuxuu taageeraa difaaca jirka
2. Qani ku ah borotiinka ku salaysan dhirta
Qodobka Kobcinta Chlorella (CGF) waxaa ku jira asiidhka nucleic DNA iyo RNA, oo mas'uul ka ah dib -u -soo -nooleynta gacanta. CGF waa biyo-milmi kara wuxuuna mas'uul ka yahay kartida cajiibka ah ee Chlorella si uu u bogsado oo u cusboonaysiiyo jirka bini'aadamka, u dayactiro unugyada iyo unugyada burburay, iyo kicinta koritaanka unugyo cusub taas oo ka dhigaysa noolahaan mid ka mid ah cuntooyinka ugu awoodda badan.
Waxaan kugula talineynaa Qiyaasta iyo waqtiga qaadashada chlorella
Qiyaaso kala duwan ayaa u shaqeeya dad kala duwan. Qiyaasta saxda ah waxay ku xiran tahay hab -nololeedkaaga iyo doorbididda cuntada. Caadi ahaan waxaan soo jeedineynaa inaad qaadato 1-3g maalin kasta saldhigga tixraaca qiyaasta ee doorbididda cunnada waa sida hoose:
T-REX [Carnivore] –3g (6 kiniin) Oviraptoridae [Omnivore]-2g (4 kiniin) Brachiosaurus [Herbivore]-1g (2 Tablets)
U qaybi tirada la qaadanayo dhowr jeer maalintii, nus saac cuntada ka hor, waxay hagaajisaa dheefshiidkaaga sidoo kale waxay caawisaa nuugista nafaqooyinka si aad u tayo badan. Ama waxaad qaadan kartaa spirulina subaxdii, waxaadna qaadan kartaa chlorella fiidkii si aad u sii wadato shaqada dheefshiidka iyo hurdo fiican.
Hore: Budada Spirulina 4.23oz/120g oo hodan ku ah Antioxidant